KARTOFELESAZHALKA: UJEEDO, MABDA'A HAWLGALKA, WAXSOOSAARKA GURIGA - MISHIINADA GAARKA AH
Ugu Weyn Ee Mishiinada gaarka ah
Sida loo sameeyo dhirta barafka leh gacmahaaga
Qof kasta oo ka shaqeynaya dhulkiisa wuxuu yaqaanaa sida ay u adag tahay in uu beerto baradho. Si loo fududeeyo geeddi-socodkan, aalad sida qorshe baradho ah ayaa la sameeyay.
Tilmaanta iyo ujeeddada dhismaha
Qorshe baradho ah waa qalab yareynaya isticmaalka shaqeyn jireed oo culus shaqsi ahaan beerashada baradhada, sababtoo ah waa ku filan in lagu dhajiyo tareenka socodka, buuxi digriiga, qalabkuna wuxuu ku jajabi doonaa daloolka, u jiifiyaa oo ku rusheeyaa dhulka, adigana kaliya maareeya qalabka isdifaacay oo ha ilaawin inaad buuxiso sahayda qalabka. Qeybaha waa kuwo aad u fudud in la fahmo iyo wax soo saar, xitaa si madaxbannaan. Tani waa laftirka laftiisa, kaas oo sheyga beerto, soodhawrka loo yaqaan, waa la shubay.
Dilkani wuxuu noqon karaa labadaba qaab dhismeed iyo mid layiraahdo, laakiin xaalada ugu weyn ee ay leedahay waa mid hoose oo leh jilcan wanaagsan, kaas oo hagaajin doona socodka baradhoka ah ee goobta baska lagu qaado ee dambiilayaasha gaadiidka.
Ma taqaanaa? Khudradda ugu horreysa ee koray banaanka ayaa ahayd baradho.
Waxay, laftooda, waxay ku xiran yihiin silsiladda, ama cajaladda ka soo wareegaysa dhinaca danbe ee dhinaca cidhiidhiga. Waxaan ka hadli doonaa faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada ka jirta doorashada dambe ee habka wax lagu beddelayo. Dhaafka ayaa ku dhegsan qaabka, samaynta furrow, dhagax iyo wheels, dhaqdhaqaaqa kaas oo si toos ah iskugu xirxiray dhaqdhaqaaqa baradho ka soo jiidhay dhulka.
Waa muhiim! Beeraha barafka ee guriga lagu sameeyey ayaa si fiican loo isticmaalaa carrada horay loogu diyaariyey tan.
Naqshadu waxay go'aamisaa hagaajinta buqshada ee qoto dheer ee beerto iyo beeritaanka baradho, taas oo ah, waxay bixisaa habka loo marayo geeddi-socodka oo dhan go'aankeeda.
Gaadiidka waxaa lagu sameeyaa caawimaad kasta oo ah qalabka isdifaacidda, laakiin culeyska digriigu wuxuu ku urursan yahay taayirrada, kuwaas oo sidoo kale leh tiro ka mid ah waxyaaba qasab ah. Waa inay hubiyaan isku xirnaanta tayada leh dhulka si ay u dhaqdhaqaaqaan meelaha bannaanku waxay leeyihiin xiriir toos ah oo leh habka wax lagu beddelayo.
Xayawaan ama qulqulin ayaa ka dhigaysa xadhig ka mid ah qoto dheer. Ka dib markii digriiga baradho si toos ah dhulka ugu duuban, dhagaxyada lagu rakibay xagal qaas ah, qulqul dhulka iyo heerkulka carrada beerta.
Hubi noocyo kala duwan oo baradho ah sida "Kiwi", "Luck", "Gala", "Rosara", "Irbitsky", "Queen Anne", "Blue", "Adretta".
Natiijadu waa sariir oo leh qiime joogto ah oo ka mid ah cufnaanta dhulka iyo masaafada u dhaxaysa safka. Dhamaan naqshadahan waa sahlan tahay in la joogteeyo oo lagu kalsoonaado hawlgalka.
Haddii aan tixgelineyno wareegga oo dhan ee foosha gacanta culus, kaas oo isticmaalka qalabkani uu tirtiro, markaa su'aashu waxay noqon doontaa oo kaliya haddii ay iibsato ama si toos ah gacmahaaga u samayso qorshe baradho ah.
Sida loo doorto qorshe baradho ah dukaanka
Doorashada beeritaanka baradho waxay saamayn ku yeelataa isbarbar dhiggaaga lugta-socodka. Shirkadaha qaarkood waxay u hoggaansamaan siyaasadda isticmaalka qalabkan oo keliya qalabkooda iskiis u shaqeeya. Laakiin moodooyinka qaarkood waa kuwo aad u badan oo ku haboon dhammaan gawaarida.
Marka lagu daro iswaafajinta, arrimaha soo socda ayaa muhiim ah:
miisaanka iyo ergonomics;
wax soo saarka;
awood u lahaanshaha iyo hagaajinta.
Waxa kale oo muhiim ah awoodda qashinka, taas oo ku kala duwan laba illaa shan baaldiyood oo wax lagu beero. Baaxada weyn ee tuubada, marar badan ayaad joojinaysaa baradhada, laakiin kordhinta miisaanka ayaa yareeyn doonta maneuveresting ee qalabka.
Haddii goobtaadu yartahay, dooro qorshe baradhada kali ah. Qalabka labada-lakab ayaa leh awood sare oo loogu talagalay in lagu shaqeeyo aagagga dhul-beereed. Fursadaha qaarkood waxay leeyihiin awood dheeri ah oo loogu talagalay bacrimin loo isticmaalo baradhada.
Waxaad sidoo kale xiiseyneysaa inaad barato tiknoolajiyada Holland ee baradho sii kordhaysa, baradho sii kordhaysa caws iyo bacaha.
Qorraxda dheeraadka ah ee xirmada ayaa kaa caawin doonta isku-duwidda soo noqnoqoshada iyo xawaaraha dhaqdhaqaaq ee cutubka. Qiimaha kala duwan ee qalabku waa, qaaliga qaaliga ah waa, laakiin weli qiimuhu wuxuu ku sii jirayaa heer la aqbali karo iibka oo aan qarash badan.
Faa'iidooyinka iibsigu waa kuwo aan la isku hallayn karin: wakhtiga kaydinta, dadaalka, iyo fududeynta habaynta mustaqbalka, daryeelka, iyo goosashada.
Ma taqaanaa? Qiimaha baradho ee suuqa ma u muuqdaan mid aad u sarreeya? Oo sidee baad 500 euro u qaadataa halkii kiilo ee baradhada ugu qaalisan adduunka! Waxaa la sheegay in noocyo kala duwan, loo yaqaan "Lacag yar", wuxuu leeyahay dhadhan jilicsan.
Iyadoo ku xiran habka baradhada ayaa la quudin karaa, beeridda baradhada ayaa loo qaybiyaa silsilad iyo suun. Kuwa hore waxay bixiyaan gudbin la isku halleyn karo, laakiin silsiladda qorshe baradho ah ee dhaqdhaqaaqa waxay waxyeeli kartaa digriiga, taas oo aysan saliideedu sameynin. Laakiin haddii xiisaddu aysan ku filneyn, cajaladku wuu ka bixi karaa, waxaadna ka tagi doontaa boos madhan halkii baradho la beeray. Labada xaaladood, baradhada ayaa la jarjarey oo waxay ku guureen dambiilaha, dhaqdhaqaaqa taas oo la socotey dhaqdhaqaaqa gaariga.
Dayactirida iyo isticmaalka dhammaan beeraajada baradho si ay u noqoto mid fudud, laakiin waxay u baahan tahay kormeer joogto ah iyo dayactir haddii loo baahdo. Cutubyada warshaduhu waxay u adeegaan xarumaha adeegga khaaska ah.
Dabeecad taxadar leh qalabkan ayaa kuu oggolaanaya inaad u adeegto sanado badan oo aad ka sameysid wax ka badan hal xero oo leh goosashada wanaagsan.
Sidee naftaada u sameysaa
Beeralayda qaarkood waxay qalabeeyeen qorshe-baradho baraf ah, oo lagu sameeyey gacmahooda. Tani waa ka raqiisan haddii aad isticmaasho waxyaabaha ka soo jeeda qalabka qashinka qubayska, geesaha birta, taarikada, silsiladaha ku haboon ee leh astaamaha.
Qalabka iskiis u shaqeeya wuxuu noqon karaa mid aan ka xuneyn dukaanka dukaanka wuxuuna u adeegaa sharaf sanado badan.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad wax ka barato xeerarka ku saabsan la tacaalida cudurrada baradho iyo hababka ugu wanaagsan ee loo bacrimiyo.
Diyaarinta qalabka iyo qalabka
Diyaargarowgu waa inuu ka bilaabaa naftaada. Go'aanso sida aad u rabto inaad samayso baradho baradhada, qalabyada aad u baahan tahay inaad samayso adigu, fiiri sawirada diyaar ah ee internetka, oo aad iskaa u sameysid qaddaro sax ah.
Wixii soo saarista ee beeraleydu waxay u baahan doonaan qalabka soo socda:
geeska birta ah, kaas oo qaabka weldelka la xiri doono;
taangiga sida dhaqdhaqaaqa u shaqeeya (inta badan wuxuu isticmaalaa taangiyada mashiinada qubeyska waayeelka, laakiin haddii aad haysato hab kale oo habboon adigoo adeegsanaya cabbirada lagama maarmaanka ah, markaa isticmaal);
duufaannada gudbiya tiknoolajiyada laga bilaabo taayirrada taageerada si ay u sii wato;
fiilooyinka iyo siligga dambiilaha;
Iyo waliba qalab:
Saldhigga qalab kasta, iyadoon loo eegin arjiga, waa shey ku yaala qaybaha iyo qaababka loo xalliyo. Shaxankeenu wuxuu ka koobnaan doonaa laba baarlamaan oo dheer oo ku xiran xoojinta saddex meelood.
Qoryaha iyo coulter ayaa lagu dhejin doonaa dhinaca hore. Waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo shaxanka leh daboolka birta.
Hawsha qashinka ma aha oo keliya wareejinta qalabka isdifaacay, laakiin sidoo kale helitaanka suurogalnimada, oo la socota ripper, si loo xakameeyo oo loo hagaajiyo qoto dheer ee qiiqa. Sidaa daraadeed, fiilka, kaas oo lagu welded horay uga sameysan yahay, wuxuu leeyahay xajin ciriiri ah oo si xor ah u shaqeeya xagasha toosan. Dhererkoodu wuxuu ku xiran yahay dhuujinta fargeetada.
Waa muhiim! Maadaama miisaanka loo yaqaan planer baradhada, naqshadeynta ayaa noqon karta mid aan degganeyn. Marka la eego, waxaa lagu talinayaa in la qalabeeyo qaybta hore ee fiilada.
Asalka asalka ah ee loo isticmaalo sameynta beeraleydu maaha mid muhiim u ah hawlaha ay qabtaan. Way ka fiican tahay inaad sameysid qaab-dhismeedka balaadhan oo waaweyn, oo leh caleen qallalan.
Hawlgalkoodu waa inuu isku-duwo dhaqdhaqaaqa ciidda iyadoo la adeegsanayo farsamada quudinta abuurka, oo saamayn ku leh dusha sare. Xarumaha waxaa lagu rakibay kubbadaha kubbadda oo lagu rido khadadka. Si aad uga hortagto wasakhda iyo dhirta in ay galaan qaybaha munaasabka ah ee farsameynta, waxaa la isticmaali karaa nuucyo badan oo nuucyo ah, iyo sidoo kale kallooyin ku xiran.
Waxaan u isticmaalnaa dhejis dhagax adag ama tuubbo dhoobo ah, maxaa yeelay waa in ay u adkaysato culus ba'an, waxay ku dhejisaa boomaato iyo biinanka. Ka dib marka la soo xiro farsamaynta oo dhan, biinanka waa la xiraa, lakabkuna waa la hagaajiyaa caawimada dhejiska iyo birta.
Ogow marka ay ugu fiican tahay inaad ku beeri baradho iyo sida loo sameeyo ka hor xilliga qaboobaha.
Holders for ripper waa in la kariyo laga bilaabo gees ah biraha foomka of square ah. Corners waxay isticmaalaan tayo wanaagsan, maadaama ay suurtagal tahay in la qabsado xilliga qaliinka. Qulqulatada, sida qashinka, waxay leedahay qiyaas xajmiga xorriyadda, oo leh xargaha iyo xargaha.
Si aad u daadiso jeexjeexka dhulka iyo qaabka saxda ah ee godka, dhejiyo ku dul taagan xagal qaas ah ayaa loo isticmaalaa. Dhexdhexaadinta, waxay u wareegaan dhulka kuna duubaan digriiga baradho.
Dariiqyada isku dheelitir la'aanta isku-dhafka ayaa laga soo saari karaa beeraleyda, laakiin waa in lagu dhajiyaa dheeraad ah si loo joojiyo dhulka in uu galo guntinta.
Si loo soo saaro tuubada, taangiyada mashiinada qubeyska hore ayaa loo isticmaalaa, laakiin waxay leeyihiin culeys aad u culus oo ah qaab xagal hoose oo hoosta ah, oo sababa dhibaatooyinka marka wax lagu beerto oo aan la geyn karin dambiilayaasha xiisaha leh. Sidaa daraadeed, marmarka qaarkood waxaa si gaar ah loogu sameeyaa xaashiyaha birta ama curiyaha oo ku saabsan 1 cm qaro weyn.
Qaybaha ka samaysan tufaaxa waxaa lagu jaray jajab, waxaa lagu daweeyaa wakiilo qaas ah oo ka hortagaya waxyeelo farsamo iyo farsamooyin leh waxyaabo dareere ah. Waxaa lagu dhejiyaa tuubbo biri ah waxaana lagu daboolaa gudaha caagagga si looga hortago barandhada in uu waxyeelo soo gaadhay.
Laba baarar ayaa sidoo kale welded shaxda si siman, u oggolaanaya qalabka loo xirxiray sare si ay u gudbiyaan dhaqdhaqaaqa laga bilaabo giraanyaha ilaa silsilad leh dambiilaha.
Markaad sameysid baraha barafka, buunshaha sameyska ah waxaa lagu sameyn karaa gacmahaaga ka samaysan warqad bir ah ama tuubbo leh dhexroor qiyaastii 10 cm. Fududeeyaha waa la jajabinayaa si loo xakameeyo xaaladda iyo jagada silsiladda. Dambooyinka waxaa laga sameeyaa siddooyin bir ah ama dhammaan silig. Dhimashadooda iyo muuqaalkooda ma ciyaari karaan kaalin weyn, maaddaama qaabka barafka laftiisu uu aad uga fog yahay.
Waa muhiim! Ka dib markii laga beerto bataatooyinka iyo dabagalka, baaritaanada muraayadaha ayaa wali ku sii jiri kara goobta. Si looga hortago tan, waxaad u baahan tahay inaad ku xereeysid boogaha khaaska ah ee ka dambeeya faallooyinka, taas oo, geli kara ciidda, kala fur furida, baabi'inta raadiyaha barafka.
Qorshe baradho ah waa unug aad u faa'iido badan beerta, xitaa haddii beertaadu aysan aad u weynayn, markaa way kuu fududaaneysaa haddii la helo ama la dhiso.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Mishiinada gaarka ah 2020